Ogaden News Agency (ONA) – Toogasho Ka Dhacaday Magaalada Manchester Dalka UK.
Toogasho Ka Dhacaday Magaalada Manchester Dalka UK.
Laba caruur ayaa ka mid ah dadkii ku dhawaacmay weerarka toogashada ee ka dhacay agagaarka Moss Side ee magaalada Manchester, booliska ayaa sidaasi sheegay.
Booliska ayaa sheegay in dhibaneyaasha ay kamuuqdeen dhaawacyo fudud balse nin ka mid ah ayaa dhaawac culus qabay ayaa isbitaalka la dhigay. Toogashada ayaa ka dhacday waddo xaflad ay ka dhacaysay.
Taliyaha booliska ee magaalada Manchester ayaa sheegay in dhawaacyada aysan ahayn kuwa culus uuna rajeeynayo in goordhow dhaawacyada isbitalka laga soo saari doono. Waxa u intaasi ku daray in toogashada ay ahayd ficil masuuliyad darro ah.
Ninka cisbitalka ku jira ayaa sheegay in dhaawiciisu uu culus yahay balse ay haatan xaaladiisu wanagsan tahay. Weli ma cadda in dhaawiciisu yahay rasaas ku dhacday laakiin waxaa loo malaynayaa inay yihiin firiro soo gaaray ninkaas hadana waxaa lagu dabiibayaa isbutaal ku yaala magaladaas.
Dr Erinma Bell oo u ololeeysa ka hortagga Qalalasaha ee Moss Side ayaa saxaafada u sheegtay in ay aminsan tahay in toogshada uu geeystay hal nin oo kaliya balse arrintan booliska ma aysan xaqiijin. Waxaa wadada uu shilku ka dhacay ay ka socotay Xafladan oo loogu magacdaray Caribbean ayaa la qabtaa xilliga kuleylaha tan iyo 1972, taas oo ay ka soo qeyb galaan kumanaan qof.